गल्याङ ईलुङ्गामा भलिवल प्रतियोगिता सम्पन्न
गल्याङ - स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–२, इलुङ्गामा जारी पुरुष भलिवल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । इलुङ्गा खेल समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका उप–प्रमुख देवि सरा थाला मगरले खेल राष्ट्रको पहिचान भएको बताउनुभयो ।
उहाँले इलुङ्गा खेलकुदको क्षेत्रमा निक्कै जागरुक भएकाले नगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । थापा मगरले ईलुङ्गाका युवाले खेलकुदलाई निक्कै माया गर्ने भएकाले राष्ट्रिय खेलाडि उत्पादनको थलो बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
भलिवल प्रतियोगितामा वयस्क तर्फ इलुङ्गा खेल समिति विजेता बन्दै ५१ हजार प्राप्त गरेको भने जनसक्ति युवा परिवार कपुर्दीले दोस्रो स्थान ओगट्दै ३५ हजार प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै कालिका युवा परिवार कुरुङ्चेले तेस्रो हुँदै १८ हजार र आयोजक समुह (बि) ले सान्त्वना हुँदै १० हजार प्राप्त गरेको छ । सवै विजेता टिमले सिल मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन ।
त्यस्तै पु.पू ४५ वर्ष भन्दा माथिको प्रतियोगितामा गल्याङ भु.पू ले विजेता बन्दै खसि, सिल मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छ भने इलुङगा भु.पू ले खसि सिल मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छ । इलुङ्गा खेल समितिका अध्यक्ष थगेन्द्र सोमै मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सदस्य लाल वहादुर घर्तिले गर्नुभएको थियो ।
मनोबाद : (दोषी म) कसैको मन नदुखाउने हजुर कसरी दोषी बन्न सक्नु हुन्छ ?
धेरै गुलियो खाएमा यसरी विग्रन्छ दाँत !
रामपुरको भुजातमा तेस्रो खुल्ला क्रिकेट प्रतियोगिता हुदै
स्याङ्जामा छाडा चौपाय र बाँदरले सतायो भन्दै स्थानीय सरकारलाई जनताको गुहार
स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा आगलागीमा परी एक युवक मृत्यु
गल्याङमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
स्याङ्जाको गल्याङ बजारमा बोरिङ स्टिमबाट पिउने पानी निकाल्ने काम सुरु